Safiiro loo magacaabayo Safaaradaha Soomaaliya ee Kenya, UK iyo Turkey. | Welcome to Lafweyne.com|
Safiiro loo magacaabayo Safaaradaha Soomaaliya ee Kenya, UK iyo Turkey.
Dowladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay u magaacaabi doonto safiiro cusub dalalka Uk, Turkey iyo Kenya, iyadoo lagu wado in shirka golaha wasiirada maanta ee lagu ansixin doono.
Wararka ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay Safiir u magacaabi doonto UK, C/raxmaan Yuusuf Cali Ceynte oo ahaa Wasiirkii hore ee Qorsheynta, ahna xilligan madaxa qaban qaabada ee shirka London.
Sidoo kale waxaa lagu wadaa in Xuseen Qaasim loo magacaabo dalka Kenay, Xuseen Qaasim ayaa lasoo shaqeeyay madaxii hore ee kooxda UN Monitoring Group Matt Bryden. Xuseen Qaasim ayaa kasoo jeeda deegaanka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Waxaa kaloo lagu wadaa in loo magacaabo Safaaradda Soomaaliya Turkey ee Ankara nin lagu magacaabo Jaamac Ceydiid oo ah nin dhalinyaro oo baayac mushtar ah, shaqo dawladeed aan hore usoo qaban. Jaamac Caydiid wuxuu kasoo jeeda goboladda Sool Sanaag iyo Cayn.
Safaaradda Soomaaliya ee Turkey ayaa ahayd mid banaan tan iyo markii safiirkii hore ee Sanbaloolshe sanadkii hore uu noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawlada Somalia, balse markii dambe loo magacaabo xilka taliyaha nabadsugida.